ရေနံစုပ်ယူသော filter sock
အသုံးပြုမှုအတွက် ၉၆% ထက်ပိုမိုသောတောင်းဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်စစ်ထုတ်အိတ်များ
AGF filter အိတ်သည်စစ်ထုတ်ရန်ပိုမိုတင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးဂဟေဆော်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းပေါင်း ၁၀၀% အားနောက်ဆုံးပေါ်စစ်ထုတ်သည့်နည်းပညာကို ပြုလုပ်၍ စက်မှုနည်းပညာကိုအခြားအဆင့်သို့မြှင့်တင်ရန်အိတ်စစ်ထုတ်ခြင်းကိုအဆင့်သစ်သို့ ဦး တည်စေသည်။
၁။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောစစ်ထုတ်ပစ္စည်းများ၊ သိပ်သည်းမှု gradient ပစ္စည်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုနှင့်လုပ်ငန်းသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေသည်။
ထိပ်ပြissueနာနှင့်အတူပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမျှင်ဖယ်ရှားပစ်ရန် 2. အပြင်ဘက်အကာအကွယ်အလွှာ။
၃။ စစ်ထုတ်သည့်အိတ်အားလုံးသည်အစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာနှင့်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်သင့်တော်သောအစားအစာစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) အတည်ပြုထားသောပစ္စည်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၄။ ဂဟေဆော်ခြင်းနည်းလမ်း၏အောက်ခြေတွင်တစ်သမတ်တည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပိုမိုထူးခြားသည်မှာပိုမိုအားကောင်း။ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂဟေဆော်သည့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
5. လုံးဝသန့်စင်သောအရည်ပျော်လွင့်စင်သော polypropylene ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မည်သည့်ဗဓေလသစ်၊ ဘိလပ်မြေသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်သန့်စင်မှုများကိုထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းမရှိဘဲ။
7. ပစ္စည်း: PP ။ အရည်ပျော် - လွ Polyester
ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ အရက်နှင့်အဖျော်ယမကာစစ်ထုတ်ခြင်း
ဖြစ်စဉ်ကိုစနစ်များအတွက် activated ကာဗွန်ဖယ်ရှားရေး
AGF polypropylene filter အိတ်များကို hydrophobic microfiber filter material မှပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်မတူညီသော pp နှင့် polyester ပစ္စည်းများအတူတကွအလွှာနှင့်အတူ aqueous ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ကြိုတင်မဆေးစိမ်ရန်လိုအပ်သည်။
မြင့်မားသောထိရောက်သောအရည်ပျော်မှုမှုတ်သွင်းသည့် filter material ဖုန်မှုန့်များ (သို့) polyester တွင်အဆင့်မြင့်သိပ်သည်းမှုပရိုဖိုင်းများပါ ၀ င်ပြီးဖုန်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးလုပ်ငန်းသက်တမ်းကိုရှည်စေသည်။
အောက်ခြေချုပ်ရိုးများအတွက်ထူးခြားသော UNI-WELD လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုအားကောင်း။ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂဟေဆော်တံကိုပေးသည်
တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်နှင့်အပြည့်အဝ - ဂဟေဆော်သောဆောက်လုပ်ရေးသည် ၁၀၀% ရှောင်ကွင်း - အခမဲ့စစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်
ဖိအားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်စွပ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဓာတုဗေဒဒဏ်ခံတံဆိပ်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အိတ် filter filter ကိုမဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်
Sffiltech က filter အိတ်၏အိတ်ထဲထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတောင်းအတွင်းရှိ filter အိတ်၏မှန်ကန်သောညှိနှိုင်းမှုကိုသေချာစေသည့် insertion tool တစ်ခုအသုံးပြုရန်အထူးအကြံပြုလိုသည်။
လျှောက်လွှာ၏ ၉၉% ထက် ပို၍ တင်းကျပ်သော၊
အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတင်းကြပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလိုအပ်ချက်များအပြည့်အဝရှိနိုင်သည်